11/07/13 ~ Myanmar Forward
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင် ဖြစ်ပျက်ကိုမုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံး၍ ကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန် ငြိမ်းဝင်စံ
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ကြောင်းကံဓမ္မ ပေါင်းဆုံခမှ မြင်ကြားနံစား ထိသိများကား သိညားဝိညာဉ်
ပေါ်ရစဉ်တည်း ဣဌ အနိဌ ထိုနှစ်ဝကား ဒွါရအာရုံ ပေါင်းကာဆုံ၍
ပေါ်မှန်ဝိညာဉ် သိစိတ်စဉ်တည်း ပေါ်လျှင်ခဏ ဖြစ်ပျက်ရ၏ ဓမ္မပေါ်စု
ဥာဏ်တင်ရှုက ပေါင်းစုငါးဖြာ ပေါ်ခန္ဓာတည်း ပညာဥာဏ်ဓာတ်
မြဲယှဉ်ကပ်က ကျင့်မြတ်တရား ဥာဏ်မြင်ပွား၏ ဟောကြားဗုဒ္ဓါ ဒေသနာကြောင့်
ခန္ဓာကြောင်းရင်း သိမှန်ခြင်းတည်း ဖြစ်ရင်းတွေ့ကြုံ ကောင်းဆိုးစုံသည်
အာရုံခံဓာတ် ခြေသတ်မှတ်၍ ပေါ်အပ်တရား ဖြစ်စဉ်ပွား၏ တွေ့ညားဣဌ
အနိဌနှင့် ဖြစ်ရဧကန် သိဝိညာဉ်ကို ဥာဏ်ယှဉ်ဝိပဿ် ရှုမြင်မှတ်က
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင် ဖြစ်ပျက်ကိုမုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံး၍ ကောင်ဆုံးနိဗ္ဗာန် ငြိမ်းဝင်စံတည်း.......
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under ဟာသ | No comments
မိုးပျံကား တီထွင်မှု နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသည့် AEROMOBIL 2.5
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under နည်းပညာ | No comments
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လွန်းသည့် အခြေအနေများအား ဖြေရှင်းရှောင်လွှဲမှုအဖြစ် မိုးပျံကား စီမံကိန်းများ အပြိုင်အဆိုင် ဖန်တီးတီထွင်နေရာ AeroMobil 2.5သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
မိုးပျံကားများ အပြိုင်အဆိုင် တီထွင်နေမှု နယ်ပယ်မှ အအောင်မြင်ဆုံး မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ် AeroMobil 2.5က ဦးဆောင်နေပြီဟု ဆိုရပေမည်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့လွန်းသည့် အခြေအနေများ အား ဖြေရှင်းရှောင်လွှဲမှုအဖြစ် မိုးပျံကား စီမံကိန်းများ အပြိုင်အဆိုင် ဖန်တီးတီထွင်နေရာ AeroMobil 2.5သည်လည်း တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကား တစ်စင်းအဖြစ်မှ လေယာဉ်ငယ် တစ်စင်း အသွင် အလွယ်တကူ ကူးပြောင်းနိုင်သည့် AeroMobil 2.5သည် လတ်တလော စမ်းသပ်မှုများအရ အထင် ကြီး လောက်ဖွယ် အခြေအနေကောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း သိရသည်။ AeroMobil 2.5သည် လမ်းပေါ်တွင် မော်တော်ကားတစ်စင်းအဖြစ် အမြင့်ဆုံး မြန်နှုန်း တစ်နာရီ (၉၉)မိုင်ထိ မောင်းနှင်နိုင်သည်။
သို့သော်လည်း အတောင်ပံများကို ဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး လေယာဉ်ငယ် တစ်စင်းအနေဖြင့် ပျံသန်းသည့်အခါ တစ်နာရီလျှင် (၁၂၄)မိုင်နှုန်းထိ မောင်းနှင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ဒီဇိုင်းပညာရှင် နှစ်ဦးဖြစ်သည့် စတီဖန်ကလိန်းနှင့် ဂျူရက်ခ်ဗာကူလစ်ခ်တို့ ပူးပေါင်းတီထွင်သော မော်တော်ကားလေးကို ယခုအခါ ဝေဟင်နှင့် မြေပြင် စမ်းသပ်မှုများ အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပညာရှင် နှစ်ဦးလုံးသည် ဆလိုဗက်ကီးယားရှိ ဘရာတီဆလာဗာ ဒေသတွင် နေထိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
"လမ်းပေါ်မောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ အတောင်ပံတွေကို ခေါက်ထားဖို့ လိုပါတယ်"ဟု စတီဖန်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ယခုမော်တော်ကားလေးကို မွန်ထရယ်လ်တွင် ကျင်းပသည့် AeroTech လေကြောင်း ပြပွဲ၌ စွမ်းရည်ပြ ပျံသန်းပြခဲ့သည်။ "တကယ်တော့ မိုးပေါ်ပျံနိုင်တဲ့ မော်တော်ကားမျိုးကို တီထွင်နိုင်ဖို့ (၁၉၉၀)လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။ ပထမဆုံး မော်ဒယ်လ်က တော်တော့်ကို အချိုးမကျဖြစ်ခဲ့ပြီး ပြဿနာတွေလည်း တော်တော်များခဲ့တယ်။ အဲဒီကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ပိုကောင်း အောင်၊ အမှားပိုနည်းအောင် ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်။ လက်ရှိ မော်ဒယ်လ်ကတော့ လေကြောင်းပျံသန်းမှု ဆိုင်ရာ သုတေသီတွေက မှတ်ချက်ကောင်းကောင်း ပေးထားတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာပါပြီ"ဟု ကုမ္ပဏီ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် တာတီရာနာ ဗီဘာက ပြောကြားခဲ့သည်။ AeroMobil ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ မော်တော်ကားလေးကို နည်းပညာပိုင်း ဆက်လက်မြှင့်တင်ရန် သုတေသနပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုမော်တော်ကားသည် သာမန်ဓာတ်ဆီဆိုင်လေး တစ်ခုတွင်ပင် ဆီဖြည့်နိုင်သည့် လောင်စာမျိုးကိုပင် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။ "ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင် ထိုးရပ်ပြီး ဆီဖြည့်လို့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ဆီ မလိုပါဘူး။ အင်ဂျင်ကတော့ Rotax 9212 ULSကို သုံးထားပါတယ်"ဟုလည်း တာတီရာနာက ရှင်းပြခဲ့သည်။ အပေါ့စား သံမဏိကိုယ်ထည်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် ယင်းမော်တော်ကားလေးသည် ဆီအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးပါက မိုင်ပေါင်း(၃၁၀)ထိ ခရီးပေါက်အောင် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကားလေး၏ အကျယ်မှာ (၁)မီတာခွဲမျှသာ ရှိသည်။ အကယ်၍ တောင်ပံများကို ဆန့်ထုတ်လိုက်လျှင်မူ (၈)မီတာကျယ်သည့် နှစ်ယောက် စီး လေယာဉ်ငယ်လေးအသွင် ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်အနေဖြင့်မူ ဆီအပြည့် ဖြည့်ပြီး ချိန်၌ မိုင်ပေါင်း(၄၃၀)ထိ မရပ်မနား ဆက်တိုက်ပျံသန်းနိုင်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
Source: Planet Myanmar Network
အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန်တွင် စက်လှေဆိပ် လုပ်ငန်းအတွက် BOTစနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန် နိုဝင်ဘာ ၈ရက် နောက်ဆုံးထား တင်ဒါခေါ်ယူ
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန်တွင် စက်လှေဆိပ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုသော လုပ်ငန်းရှင်များကို တင်ဒါခေါ်ယူရာ၌ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် နောက်ဆုံးထားကာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန် ဖော်ထုတ်ရေး ဦးစီး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ အဆိုပါ အင်းလေးဒေသ အတွင်း၌ ပွင့်လင်းရာသီ ဝင်ခါစတွင် ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှုနှုန်း တိုးတက်လျက်ရှိရာ ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်မှု ပိုမိုရရှိရေးအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် စက်လှေဆိပ်များကို အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် BOT စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်အထိ တင်ဒါလျှောက်ထားမှု လက်ခံ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''လုပ်ငန်းရှင်တွေက စိတ်ဝင်စားမှုများ ကြပါတယ်။ ရွေးချယ်ခေါ်ယူမှာဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းကို အသေချာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ပါဝင်လာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တင်ဒါပိတ်ရက် နီးလာပြီ။ အမြန်လာရောက် လျှောက်ထားစေချင်ပါတယ်'' ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။ တင်ဒါလျှောက်ထားသူများ အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေး ပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပြီး တင်ဒါလုပ်ငန်း တစ်ခုထက် ပိုမိုတင်သွင်း လိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းစီ အတွက် တင်ဒါအာမခံကြေး ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားလွှာများကို အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန် ဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီ၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ တောင်ကြီးမြို့ သို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းများမှာ ညောင်ရွှေမြို့နယ် အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန် အတွင်းရှိ ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်း၊ ကတ္တရာခင်းခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရေပြွန်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ လမ်းလယ်ကျွန်း ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ကျောက်အုတ်သရိုးစီ ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ လူသွားစင်္ကြံ ပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ဖို. စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား တစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စွဲချက်တွေနဲ. ဂျကာတာမှာ ယနေ. တရားရုံးတင်
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ဖို. စီစဉ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား တစ်ဦးကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး စွဲချက်တွေနဲ. ဂျကာတာမှာ ယနေ. တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
စွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေအရ ပြစ်မှုကျုးလွန်ကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်သူဟာ သေဒဏ် ကျခံရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေ ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ် ခံရတဲ့အတွက် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Separino ဟာ အစ္စလမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေနဲ. ပူးပေါင်းပြီး သံရုံးကို လက်စားချေ ဗုံးခွဲဖို. စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို. တရားခွင် အပြန်အလှန် လျှောက်လဲချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Saparino နဲ. အပေါင်းအပါ တစ်ဦး စီးနင်းလာတဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်ကို မေလ ၃ ရက်က ရဲတပ်ဖွဲ.က ရပ်တန်. စစ်ဆေးရာမှာ သူတို. လွယ်ထားတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ လက်လုပ်ဗုံးတွေ တွေ.ရှိရတယ်လို. သိရပါတယ်။ သူတို. ငှားရမ်း နေထိုင်တဲ့ အိမ်မှာလဲ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းတွေ တွေ.ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ ဒီကိစ္စကို ကြိုးကိုင်သူ Sigit Indrajid နဲ. အခြား နှစ်ဦးကို ရဲက ထပ်မံ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
သူနဲ. အတူ ဖမ်းဆီး ခံရသူ အခြား လေးဦးကိုလဲ နောက်ပိုင်းမှာ ရုံးတင် စစ်ဆေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စွပ်စွဲချက်တွေကိုတော့ သူတို. အားလုံးက အပြစ် မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားကြပါတယ်။
တရားလိုပြ ရှေ.နေက Saparino ဟာ ဂျကာတာ မြို.လယ်က ဗလီ ၀တ်ကျောင်း တစ်ခုမှာ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး သမားတွေရဲ. ဟောပြောချက်တွေကို နှစ်လ ရှည်ကြာ နားထောင်ရင်းက အစွန်းရောက် ၀ါဒီ တစ်ဦး အဖြစ် သွပ်သွင်းခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို. တရားခွင်မှာ လျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ဘာလီဗုံးခွဲမှုရဲ. လက်သည် Abu Bakar Bashir ရဲ. ဟောပြောချက်တွေကိုလဲ သွားရောက် နားထောင်လေ့ ရှိတယ်လို. သတင်း ရရှိပါတယ်။
သူတို.ရဲ. ဗုံးပြုလုပ်နည်း သင်ယူရာ နေရာက အင်တာနက်ဖြစ်ပြီး ဒီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်သူတွေဟာ facebook ကတဆင့် ဆုံတွေ.ခဲ့ကြတာလို. သိရှိရပါတယ်။
သီရိမင်္ဂလာ ကမ္ဘာအေး စေတီတော် မြတ်ကြီး၌ မသိုးသင်္ကန်း ရက်လှူပူဇော်ပွဲ ကျင်းပမည်
၂ဝဝ၆-၂ဝဝ၇ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မှစ၍ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည့် သီရိမင်္ဂလာ ကမ္ဘာအေး စေတီတော်မြတ်ကြီး၏ မသိုးသင်္ကန်း ရက်လှူ
ပူဇော်ပွဲကြီးကို ခြောက်နှစ်ကြာပြီးနောက် ယခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တခြားတန်ခိုးကြီးဘုရား စေတီတော်များ နည်းတူ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွား မည် ဖြစ်ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့ဝင် ဦးလှထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ မသိုးသင်္ကန်း ရက်လှူပူဇော် ပွဲကြီးကို နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်စတင်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နံနက် ၄ နာရီတွင် ကမ္ဘာအေး စေတီတော် မြတ်ကြီး၏ ပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ဘုရားဆင်းတုတော် ခုနစ်ဆူတို့တွင် ကပ်လှူပူဇော်မည် ဖြစ်သည်။ ''ဒီမသိုးသင်္ကန်း ရက်လှူပူဇော်ပွဲကို မလုပ်ဖြစ်တာလည်း ခြောက်နှစ်တာ၊ ခုနစ်နှစ်နီး ပါးလောက် ရှိနေပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာ ပြန်လုပ်ဖြစ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီတွေ၊ ဆပ်ကော်မတီတွေ ဖွဲ့ပြီးတော့ အစည်းအဝေးလုပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်တယ်။ ပြီးတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ လုပ်သလိုပြိုင်ပွဲ လုပ်ပြီး ဆုချီးမြှင့်သွားမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပြိုင်ပွဲစလုပ်မယ့် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် ညနေ ၅ နာရီမှာ ရင်ပြင်တော်မှာပဲ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်ပေးပြီး နောက်နေ့မနက် ၄ နာရီအထိ ၁ဝ နာရီအတွင်း ပြီးအောင်ရက်မယ်။ ရက်ကန်းစင်တော် ခုနစ်ခုမှာ အသင်း ငါးသင်းနဲ့ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုတို့က ရက်လုပ်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး မသိုးသင်္ကန်း ကပ်လှူပူဇော်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုအနေနဲ့ ပထမဆုက နှစ်သိန်းခွဲ၊ ဒုတိယဆု နှစ်သိန်း၊ တတိယဆု တစ်သိန်းခွဲနဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုလေး ဆုချီးမြှင့်မှာပါ။ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုတွေမှာလည်း ငွေသားအပြင် ပူးတွဲအနေနဲ့ ငွေဖလားရယ်၊ ဂုဏ်ပြုကတ်ပြားရယ် ထပ်မံပါဝင်ပြီး နှစ်သိမ့်ဆုတွေကတော့ ဖလားနဲ့ ဂုဏ်ပြုကတ်တွေပဲ ချီးမြှင့်မှာပါ'' ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့သည်။
မသိုးသင်္ကန်း ဆုချီးမြှင့်ခြင်းကို ဂေါပကအဖွဲ့မှ ဦးမြင့်သိန်းနှင့် စက်မှုအထည် လုပ်ငန်းမှ ရက်ကန်း ပညာရှင်များက ပူးပေါင်း၍ အကဲဖြတ်ကြမည်ဖြစ်ကာ ဌာပနာတိုက် အတွင်းမှ ငွေဘုရားဆင်းတု ကိုယ်တော်ကြီးအား ဆွမ်းတော်ကြီး ကပ်လှူပူဇော်ပွဲနှင့် ရဟန်းသံဃာတော် ကိုးပါးကို အရုဏ်ဆွမ်း ကပ်လှူခြင်း မသိုးသင်္ကန်း ကပ်လှူပြီးနောက် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စိတ်ကြွ ဆေးပြား များ နှင့် ဆေးပြား ထုတ်လုပ် သည့် စက်များ သိမ်းဆည်း ရမိ …
Posted by drmyochit Thursday, November 07, 2013, under မှုခင်း | No comments
တာချီလိတ်မြို့နယ် မိုင်းကိုးအုပ်စု မယ်ဖုံးလုံ ကျေးရွာ၏ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ဘာဘီချောင်း အနီး တစ်ဝိုက်တွင် စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေး ပြားများနှင့် ဆေးပြား ထုတ်လုပ်သည့် စက်များ သိုဝှက်ထားကြောင်း သတင်း ရရှိ သဖြင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် များက နိုဝင်ဘာ ၅ရက် ညနေပိုင်းတွင် သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ဘာဘီချောင်းစပ် အနီးရှိ ချုံအတွင်း၌ ဝါးရွက်ခြောက် များဖြင့် ဖုံးအုပ်ဝှက်ထားသော ဆာလာအိတ် ငါးလုံးအား ပိုင်ရှင်မဲ့ တွေ့ရှိရသဖြင့် တာချီလိတ် မူးယစ် ဆေးဝါးတားဆီး နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့စုသို့ သယ်ဆောင်၍ သက်သေများ ရှေ့တွင်ဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးရာWY စာတန်းပါ စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား တစ်ထုပ်လျှင် ၆ဝဝဝ ပြားပါ ရှစ်ထုပ် နှင့် ၂ဝဝပြား ၁ဝထုပ်၊ စုစုပေါင်း ၅ဝဝဝဝပြား၊ တန်ဖိုးကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝခန့်၊ စိတ်ကြွ ဆေးပြားထုတ်လုပ်ရန် အသင့် ရောစပ်ထားသည့် ပန်းရောင် အဖက်တမင်း အမှုန့် တစ်ထုပ်လျှင် ၁ ကီလိုပါ ၁ဝထုပ်နှင့် သုညဒသမ ၃၆ကီလိုပါ တစ်ထုပ်၊ စုစုပေါင်း ၁ဝဒသမ ၃၆ကီလိုခန့်နှင့် နီညိုရောင် အဖက် တမင်း အခဲ ၂ဒသမ ၆ကီလို၊ စုစု ပေါင်း တန်ဖိုးကျပ် ၂၅၉၂သိန်း၊ အနံ့ဆေးရည် ၃၅ဝ မီလီလစ်တာပါ တစ်ပုလင်း၊ အရောင်ဆေးရည် သုညဒသမ ၅လစ်တာပါ တစ်ဘူးတို့ နှင့်အတူ အမြင့် ၂ပေ ၁ဝလက်မ ခန့်ရှိ စိတ်ကြွ ဆေးပြားရိုက် စက်တစ်လုံး၊ အမြင့် ၂ပေခန့်ရှိ စိတ်ကြွ ဆေးပြားရိုက်စက် တစ်လုံးတို့အား သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့ပြီး သိမ်းဆည်းရမိ မူးယစ် ဆေးဝါးများနှင့် ထုတ်လုပ်သည့် စက်များ၏ တရားခံအား ဖမ်းဆီးရမိရေး စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင် ဖြစ်ပျက်ကိုမုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံး၍ ကော...
မိုးပျံကား တီထွင်မှု နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသည့် AERO...
အင်းလေးဒေသ ဟိုတယ်ဇုန်တွင် စက်လှေဆိပ် လုပ်ငန်းအတွက်...
သီရိမင်္ဂလာ ကမ္ဘာအေး စေတီတော် မြတ်ကြီး၌ မသိုးသင်္ကန်း ရ...
စိတ်ကြွ ဆေးပြား များ နှင့် ဆေးပြား ထုတ်လုပ် သည့် စ...